पिनासले सतायो ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय | Hamro Doctor News
पिनासले सतायो ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
By डा.कोपिला अधिकारी
यस्ता साइनसहरु चार प्रकारका हुन्छन् । फ्रन्टल साइनस (निधारमा), म्याक्जिलरी साइनस (दुवैतिर गालाको भित्र), इथमोइडल साइनस (आँखाहरुको बीचमा), र स्फेनोइडल साइनस ( इथमोइडल साइनसको भित्रपट्टि) हुन् । यिनीहरुलाई समग्रमा पारानेजल साइनसेस पनि भनिन्छ । साइनसमा पातलो झिल्लीको तह हुन्छ ।
नाकमा सिगान जमेर बन्द हुने भएकाले पिनासका रोगीमा सुँघ्ने शक्तिमा कमि आउँछ । कसैकसैमा विशेष गरी एक्युट पिनास भएमा ज्वरो आउने र जीउ दुख्ने समस्या देखा पर्छ ।
टाउको अगाडि झुकाउँदा टाउकोमा पीडा हुने र माथिल्लो भागका दाँतहरु दुख्ने गालातिर दुख्ने पिनासको मुख्य लक्षण हुन् ।
पिनास, भाइरल रुघा र एलर्जिक पिनास फरक फरक हुन् । भाइरल रुघा लाग्दा माथिल्लो श्वासप्रश्वास नलिको साधारण संक्रमण भएर सुनिन्छ । एलर्जिक पिनास हुँदा नाकबाट लगातार पानी जस्तो तरल पदार्थ बगिरहने, नाक, आँखा चिलाउने, हाँछ्यु आइरहने समस्या हुन्छ ।
जुन प्राय गरेर मौसमको परिवर्तनसँगै देखिने गर्छ । नाक, श्वासप्रश्वासको नलि, साइनसहरु, घाँटीलगायत एकआपसमा जोडिएका हुनाले यी समस्याहरु एउटाले अर्को निम्त्याउने गर्छ र प्राय लक्षण र रोगहरु संयुक्त रुपमा देखिन्छन् । साधारण रुघाबाट शुरु भएरपछि पिनास हुनसक्छ, र एकैपल्ट पनि देखिन सक्छ ।
पिनासका बिरामीले चिकित्सकसँग परामर्स लिएर घरेलु पद्धती अपनाउनु वा औषधि सेवन गर्नु बढी नै प्रभावकारी हुन्छ । पिनास प्राय गरेर लक्षणहरु र डाक्टरले गर्ने जाँचको आधारमा नै पत्ता लाग्छ । कहिलेकाँही विभिन्न प्रकारले टाउको दुख्ने रोगहरु क्लस्टर टाउको दुखाई, माइग्रेन, दाँतको समस्याहरु, आँखाको समस्याहरु आदिसँग यसका लक्षण मिल्ने खालका हुन्छन् । साथै क्रोनिक पिनासमा लामो समयसम्म ठिक नभएको भन्ने कारण थाहा पाउन जरुरी हुन्छ ।
पिनास भएका मानिसले सकेसम्म चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन भने धुलोधुवा र प्रदूषण्बाट पनि जोगिनुपर्छ । पिनास भएका मानिसले सकेसम्म चिसो खानेकुरा खानु हुँदैन भने धुलोधुवा र प्रदूषण्बाट पनि जोगिनुपर्छ । साथै पिनास भएको थाहा भएपछि एक लिटर पानीमा आधा चम्चा टिम्मुर र एक चम्चा ज्वानो राखेर वाफ लिनु उत्तम हुन्छ । वाफ लिएको आधा घण्टापछि गाईको घ्यू पघालेर ३ ३ थोपा नाकमा राख्ने । प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाडी सुद्धि जस्ता योग सिकेर मात्रै गर्दा पनि यसले राहत दिन्छ ।
Last modified on 2019-11-24 08:24:45